လျှပ်စစ်မော်တာ '' catalog
Y2 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၏ catalog ကိုရှာပါ
ကျယ်ပြန့်သောဖြေရှင်းနည်းများသည် Regal Beloit ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဤကတ်တလောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလျှပ်စစ်မော်တာအားလုံးသည်သက်ဆိုင်သည်။ တရုတ်ပေးသွင်းသူမှလျှပ်စစ်မော်တာ catalog ။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆင့်မော်တာများကို GOST STANDARD နှင့်အညီစက်မှုဇုန်သုံးအဆင့်မော်တာများနှင့်အညီ GOST စံ။ The 5AH series three-phase squirell- လှောင်အိမ် induction motor များသည်အိမ်အတွင်းရှိအဆောက်အ ဦး များတွင်ရေရှည်လည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Y2 စီးရီးမြင့်ဗို့အားမြင့်မားသောစွမ်းရည်သုံးဆင့်သော induction Electric Motor
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများမှလျှပ်စစ်မော်တာများကိုတပ်ဆင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းထူးချွန်မှု စက် နှင့်မီးစက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့်လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ GOST သုံးဆင့်လျှပ်စစ်မော်တာသည်ရုရှား၊ ယူကရိန်းစသောအရှေ့ဥရောပဈေးကွက်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ စံရည်ညွှန်းပစ္စည်းများ၊ အပူစီးကူးမှုနှင့်လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
လျှပ်စစ်စက်များလည်ပတ်မှုအတွက်အရွယ်အစားနှင့်ထွက်ရှိမှုစီးရီး။ ၎င်းသည်ဥရောပစျေးကွက်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူ၏သေတ္တာသေတ္တာသည်မော်တာ၏ထိပ်တွင်ရှိသည်။ ဒါ စာအုပ်ငယ် အသစ်ကစံချိန်စံညွှန်းမီ interna-onal ထိရောက်မှုအတန်းဖော်ပြသည်။ အဓိက စံချိန်စံညွှန်းများ အနိမ့်ဗို့အားမော်တာသည်။ ABB သည်ဗို့အားနှစ်မျိုးကိုပေးထားသည် induction motor စီးရီး။ ဓာတု၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောစံ induction motor များကိုသီးခြားကတ်တလောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
IEC Standard PDF ကို Catalog
Gost စံ PDF ကို Catalog
Yej စီးရီးဘရိတ်လျှပ်စစ်မော်တာ၏ catalog ကိုရှာပါ
YEJ Alu သုံးအဆင့်ဘရိတ်မော်တာ၏ YEJ စီးရီးလျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်သုံးဆင့်လျှပ်စစ်မော်တာကတ်တလောက်၊ YEJ သုံးဆင့်ဘရိတ်သော induction Motors ။ ဥရောပတွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်အနိမ့်ဗို့အားရှိသောလျှပ်စစ်မော်တာများ၏။
YDEJ2 စီးရီး electromagnetic brake motor များသည် YEJ စီးရီး၏တိုးတက်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီး JB / T6456 လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။ Imcore သည်လျှပ်စစ်ပညာရှင်ဖြစ်သည် မော်တာ stator နှင့်ရဟတ် lamination ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။
တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် swirl flap motor housing ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းသည် bung ကိုထိန်းထားသည်။ BMW 320d ပြProbleနာများ BMW3Series သည်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သော BMW ကားသည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်သန်းကျော်ထုတ်လုပ်သည်။
သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် DC ကမော်တာ၏ catalog ကိုရှာပါ
DC motor များကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသော application သည် motor speed ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ DC စက်များသည်ကျယ်ပြန့်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အအေးပေးစနစ်များကိုပေးသည်။ မော်တာထုတ်လုပ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်း 100 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။ DC Motors Motors & Generators ဘရိုရှာ Motortecnica and Service ။
ဤကတ်တလောက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် DC motor များနှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ အဓိကဒေတာပြားသည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်မော်တာဘောင်ကိုခိုင်မြဲစွာကပ်ထားသည်။
အသစ်အသုံးပြုသော & ပိုလျှံစက်မှုလုပ်ငန်း DCelectric မော်တာ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရှာဖွေစာရင်း ရောင်းရန်ရှိသည်။ စက်မှု - တန်းလေယာဉ်၊ ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ ပေါ့ပါးသော၊ မြင်းကောင်ရေအား။
Catalog PDF download လုပ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ
တစ်ခုတည်းအဆင့်မော်တာသံ & လူမီနီယံအိမ်ရာ၏ Catalog
စွမ်းအင်ထိရောက်သုံးအဆင့်ရှဉ့်လှောင်အိမ် induction motor ။ လူပျို pahse သော induction motor.This စာရင်း ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရှပ်အင်္ကျီလှောင်အိမ်မော်တာ၏စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ် features တွေနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ "ခုခံမှု" ဖြစ်လျှင် supply voltage ပိုမိုမြင့်မားလေ၊ ဒီကတ်တလောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Crompton Greaves FHP တစ်ခုတည်းအဆင့်မော်တာ Catalog
၁) GF 1 မှလွဲ၍ အထက်ပါမော်ဒယ်များအားလုံးသည် Single Phase များဖြစ်သည်။ ၂) ၃၆” ပန်ကာမော်တာများကိုလည်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၃။ Speed ​​selector ကိုရွေးပါ။ တစ်ခုတည်းအမြန်နှုန်းသုံးအဆင့်လှောင်အိမ် induction motor ၏အတန်း။ MOTORS များကိုအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် CAST ALUMINIUM မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ လည်ပတ်ငွေ၏ ၅၀% ကျော်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာမှထုတ်လုပ်သည်. သုံးအဆင့်နှင့် Single- အဆင့် asynchronous လျှပ်စစ်မော်တာ, လုံးဝပူးတွဲပါ. အရွယ်အစား 5S အတွက် B160 အနားကွပ်မှအပ Die-cast လူမီနီယံအလွိုင်း။
သုံးအဆင့်နှင့် Single- အဆင့် asynchronous လျှပ်စစ်မော်တာ
DirectIndustry ရှိ Cantoni Motor ၏အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအဆင့်အဆင့်သော Induction Motors များစာရင်းနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဤကတ်တလောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီဇိုင်း၊ အချက်အလက်နှင့်ရုပ်ပုံများအားလုံးသည် ATT Electric ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ LOW VOLTAGE MOTORS MOTOR လမ်းညွှန်တစ်ခုတည်းသောအဆင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်လျှပ်စစ်မော်တာနှင့်မောင်းနှင်မှု၏ ၀ ယ်ဈေးသည် ၁-၃ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ လူမီနီယမ်အလွိုင်းအိမ်ရာသည်အလေးချိန်ပေါ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုကြည့်ပါ။ supply voltage အတွက် single-speed သုံးဆင့်လှောင်အိမ် induction motor များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစတင်ခြင်း။
သံအိမ်ရာ PDF Catalog
လူမီနီယမ်အိမ်ရာ PDF ကို Catalog
AEEF စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာ၏ catalog ကိုရှာပါ
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက် AEEF series motor သည်သုံးဖက်မြင်၊ အပြည့်ပါရှိပြီးပန်ကာပါ ၀ င်သည်။ရှဥ့်လှောင်အိမ်နှင့်အတူလျှပ်စစ်မော်တာအအေး။ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် TECO Motors သည်ကြာရှည်ခံ။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောလည်ပတ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။
ဤကတ်တလောက်တွင် OMEC မှထုတ်လုပ်သော / သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေသောလျှပ်စစ်မော်တာအားလုံးအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ မော်တာများ။ မော်တာဒီဇိုင်းနှင့်လျှောက်လွှာအတွက်နှစ်ပေါင်း 100 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။
သုံးဆင့် AEEForizontal ပြင်ပရိုးတံလျှပ်စစ်မော်တာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ yt / aeef three-phase electric induction motor ၏ single phase induction motor မ်ားအားအလွန်ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝပူးတွဲနှင့်ပန်ကာ - အအေး လျှပ်စစ်မော်တာ ရှဥ့်လှောင်အိမ်နှင့်အတူ
အုန်းသီး Digger လျှပ်စစ်မော်တာ၏ catalog ကိုရှာပါ
တရုတ် 200W Coconut Digger AC Single Phase Electric Motor
China 200W Coconut Digger AC Single Phase Electric Motor၊ 200W Coconut Digger AC Single Phase Electric Motor မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှာပါ။
200W အုန်းသီး Digger AC တစ်ခုတည်းအဆင့်လျှပ်စစ်မော်တာ
200w အုန်းသီးတစ်ခုတည်းသောအဆင့် induction motorOperating အခြေအနေများအခြေအနေ။ Neal နောက်တဖန်သည်သူ၏တူးဖော်ခြင်းနှင့်အခြားလိုက်လျောရပါလိမ့်မယ်။ Universal Lighting သည်သင်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်အားလုံးကိုပေးစွမ်းသည်။
Neal နောက်တဖန်သည်သူ၏ရပါလိမ့်မယ် တူး နှင့် Cavalcade အပေါ်အခြားလိုက်လျော။ သင်၏မေးမြန်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောစာရင်း၊ ဈေးနှုန်း၊ အုန်းသီးခွံသံတူစက်များ· gacatory gusher crusher ကိုရောင်းချမည်။
လျှပ်စစ်မော်တာအစိတ်အပိုင်းများ၏ catalog ကိုရှာပါ
ဤကတ်တလောက်သည်အဆင့်သုံးဆင့်၊ capacitor အမျိုးအစားများအတွက်တောင်းဆိုသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုပြသည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလျှပ်စစ်မော်တာပြုပြင်ရေးဆိုင်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်ကိုကြည့်ပါ။
Grainger မှသင်၏မော်တာအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုရယူပါ။ မော်တော်ဖြီးအစုံ, အစားထိုးဖြီးယန္တရားများ, မော်တာစမ်းများအတွက်ဝယ်ပါ။ လက်ကားစျေးနှုန်းနှင့်အခမဲ့တင်ပို့ပါ။
လျှပ်စစ်မော်တာနှင့် drive ၏ဝယ်ယူစျေးနှုန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ယူအက်စ်ကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း မော်တာ အမှတ်တံဆိပ်ကတ်တလောက်ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ အချက်အလက်စာရွက်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်စာပေများကိုလည်းလေ့လာပါ။ Copeland Scroll compressors အတွက်အပိုပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေပါ။